Haddii aanu jirin audio adduunka, ka dibna nolol ku yeelan doona wax dan oo dhan. Iyo audio waa qayb ka mid ah madadaalo leh door isku mid ah video. Laakiin waxa audio?
Qaybta 1aad: Farqiyada u dhexeeya Audio iyo Music Qeybta 2: Top 5 Audio Manager Apps u Android
Qaybta 1aad: Farqiyada u dhexeeya Audio iyo Music
Erayga Audio ka yimaado hadalka Laatiin, audire taas oo macnaheedu yahay 'bay maqlaan.' ¬¬Technically ay ka dhigan tahay mowjado dhawaaq kasta oo la eego firikuwensiyada ku dhowaad min 15 ilaa 20,000 Hertz. Haddaba markii dhawaaqa codka ama qalabka ama labadaba waa isku qaab ah in ay soo saaraan luuq ka dibna waxa loo yaqaan music ah; in kale erayada runta ah arko farxinno habboonaanta waa music. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood music noqon kartaa qaab qoraal ah aad u qaab qoraalada miyuusig kuwaas oo asal ahaan u qabtay calaamadaha.
Xidhiidhka ka dhexeeya labada waa cad yahay, si loo yeedho music, audio ah ay tahay in la isku xigxiga oo abuuri luuq ama garaaca. Tusaale ahaan codka ka soo baxay mashiinka daloolin waa audio, laakiin hubaal ma music. Si kastaba ha ahaatee kaladuwan ee audio iyo music ku xiran tahay qof ka qof. Qaar ka mid ah jeclaan qalab gaar ah muusikada, halka kuwa kale ay u neceb.
Qeybta 2: Top 5 Audio Manager Apps u Android
Tababaraha audio Android, kaas oo ka ciyaari lahaa music ama naga caawin habayn music ku saabsan qalabka laakiin si ka badan diiradda saarey wax soo saarka audio ka mid ah qalabka yihiin, asal ahaan, audio kasta qalabka soo saarta. Tababaraha Audio awood u BADDALIDDA oo ay ku jiraan alarm, ringtone oo heegan iwm maamulayaasha audio ayaa inta badan loo isticmaalaa in qoraalkii ka weyn ee Android sida 2.2 iwm Tababaraha default audio Android kaliya siisaa awood u leh inay wax ka beddelo mugga ka mid ah qalabka, halka kuwan awood u leeyihiin in ay waxaa intaas ka beddelo.
Tababare Simple Audio 4.4 / 5 Free
Tababare Audio 4.3 / 5 Free
Tababaraha Easy Audio 4.4 / 5 Free
Tababare Beewhale Audio 4.3 / 5 Free
1. Maareeyaha Simple Audio
Tani waa app ugu asaasiga ah ee qaybta ee tababare maqal ah oo loogu barnaamijyadooda Android. Waxay bixisaa hab hortiisuu qummaati ugu dhaqaaqay si uu u xakameeyo goobaha audio ka mid ah qalabka ku. Waxay leedahay arrimaha waafaqsan lahayn sida ay le'eg xaq ku leh mid ka mid ah qoraalkii ugu horreeya ee android 1.6. Imtixaanka qalab ee Samsung tab 10 siiyey natiijo wanaagsan marka la eego xawaaraha iyo ka jawaabid. Waxa kale oo uu leeyahay awood u leh inuu aad u qabsato goobaha gariirka. Tani hubaal waa app ugu dhaqsiyaha badan in this category. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira la'aanta ee hal-abuurka. Shaashadda oo dhan tagaa madow laakiin kaliya qeyb ka mid ah xaafadda shaashadda waxaa loo isticmaalaa by app. App ayaa la sameeyo qoraalkii ka weyn ee android jirin kuwa cusub.
2. Maareeyaha Audio
App Tani waa mid ka mid ah Apps ugu caansan maamulka Audio Android dukaanka play ah. Waxaa sidoo kale kasoo muuqday mid ka mid ah app ugu fiican android buugaagta O'Rielly. App Tani dabcan waa mid ka mid ah barnaamijyadooda aad u yar in this category in ay widgets daaha guriga. Si loo xakameeyo goob toos ah uga soo screen guriga, waxay kuu ogolaanaysaa inaad astaysto iyo soo bixi mawduucyada kala duwan. Waxa kale oo uu awood u leeyahay inuu ku meeleeyo ringtones iyo mawduucyada design via SDK. Waa lacag la'aan ah iyo yimaado iyadoo ay xulashada ah in la gaarsiiyo si ay u helaan in lagu furo muuqaalada ku dhawaad ​​100 widgets,
Ka Google Download Manager Audio Play Store >>
3. Manager Easy Audio
Tani waa app kale ee aasaasiga ah iyada oo diiradda on sifooyinka muhiimka ah ee tababare maqal ah. Waxa ay ku siinaysaa marin loo helo isticmaalka dhammaan goobaha muhiim ah oo ku saabsan bogga laftiisa. Feature ugu wanaagsan ee app waa awood u leh inay doortaan ringtones iyo digniinaha ka app laftiisa. Qaybgalka garaafyada waa ka wanaagsan tahay Manager Simple Audio laakiin ka maqan hal-abuurka iyo midabo. Version ugu yar ee Android ay taageerto waa 2.2. Oo saamigii ah meel baa ka hadhay ee u dhexeeya fursadaha in ay dhacdo kiniiniyada. Badhamada gacanta The aadan bixin ka qabi karto ganaax.
Download Manager Easy Audio ka Google Play Store >>
4. Guru Audio
App waa xoogaa ka wanaagsan tahay Manager Simple Audio laakiin xal qoraalka waa dhibaato weyn. Size Qoraalka oo aan loo kartoo kiniinka. App wuxuu bixiyaa shan mawduucyada iyo awoodda ay u dhigay customizable profiles. Waxa kale oo uu heysto dooq widget. Waxa ugu muhiimsan ee app waa awood u leh inay beddesho profiles ku xiran tahay waqtiga maalinta. Bal qiyaas waxa ay u fidinno sare digtoonaanta oo aroortii ka dibna hoose jeer xafiiska atomically. App waa mid dhakhso badan, ka jawaabaan, laakiin badan oo boos screen madhan tahay oo lagu isticmaali karo design iwm khariidad waa quruxsan aasaasiga ah oo aan haba yaraatee hal abuur leh ee wax. Kontaroolada oo aan caddayn ku filan marka loo isticmaalo markii ugu horeysay. Waxa kale oo uu leeyahay qaar ka mid ah arrimaha la version ICS iyo wixii ka sareeya.
Download Audio Guru ka Google Play Store >>
5. Maamulaha Beewhale Audio
App waxaa ay diyaariyeen Beewhale iyo waa app kale fudud oo ay gacanta ku audio. Waxay leedahay dhammaan fursadaha ay u maamusho audio ka soo baxaya qalabka. View tab waa mid aad u fursado dheer oo yar in astaysto. Waxaa jira wax aan isbedelka theme dheeraad ah safarada. Rating waa quruxsan celcelis ahaan. Si kastaba ha ahaatee dib u eegista ma yihiin in xun.
Download Manager Beewhale Audio ka Google Play Store >>
> Resource > Android > Top Manager Audio Android 5: Maamul iyo raaxaysta Audio on Device Android